Ukusebenza Okubalulekile Kusuka Semalt: Indlela Yokusetha Ukukhangisa Kwakho Kwemithombo Yomphakathi Kuze Kuphumelele
Akekho ongakwazi ukuphikisa ukuthi imithombo yezokuxhumana iyisipulatifomu esingcono kakhulu lapho umkhiqizo ungafinyelela khona esizukulwaneni Z (Isizukulwane) kanye nezigidi zeminyaka. Eqinisweni, amaphesenti angu-95 kubo bonke abadala abaneminyaka yobudala engama-18 no-34 banamathuba amaningi okucubungula ukuthenga kusuka ku-brand eqinisekisiwe kwi-platform yezenhlalo abayisebenzisayo.
Uma kuziwa ekukhangiseni, ungahlala ucabanga ngokumaketha kwemithombo yezenhlalo. Inikeza ukubuyiselwa okukhulu ekutshalwa kwezimali ngezindleko ezincane - web design or app design. Lokhu kwenza ukufundwa okuhle kwezinkampani ezincane nezinkampani ezincane kanye nokuqala kokuqala okungenayo imisipha yezezimali ukusetha umkhankaso omkhulu.
Ngalokhu engqondweni, uJulia Vashneva, isazi esiholela phambili Semalt , Amasevisi weDivaysi, ubheka amathiphu wokuthi ungathola kanjani okuningi emkhankasweni wakho wezokuxhumana wezezimali ezisesezansi
Yenza okunye ukuhlolwa
Emibuthanweni yempi, kunokuthile okubizwa ngokuthi ukuhlaselwa ngonya. Leli qhinga lapho ibhethoni lithumela iqembu elincane ukuze liphakame isitha. Ungasebenzisa ukuhlola okunomthethelo emkhankasweni wakho, kodwa esikhundleni sokuthumela amasosha, uzobe udela izinsiza zakho. Ngokubeka imali yakho emikhakheni ehlukene, uthola ukuthola ukuthi yiyiphi i-ROI engcono.
Khetha inethiwekhi efanele
Amaqembu ahlukene ahlosiwe anemiphakathi ehlukene. Isibonelo, abantu abasha abaneminyaka engama-25 kuya ku-34 basebenzisa i-Facebook njalo njalo..Lokhu kubandakanya kuphela abangu-29.7% wabasebenzisi bonke. Kuyathakazelisa ukuthi abasebenzisi be-Facebook baningi abesifazane abanama-77% abasebenzisa lesi sayithi uma kuqhathaniswa no-66% wabantu bonke.
Uma uletha i-YouTube esithombeni, izitatimende zihlukile kancane. Lapha abesifazane babala kuphela abasebenzisi abangu-38% nabo bonke abanye ngokusobala besilisa. Ngaphezu kwalokho, ngaphezu kwezingu-50% kuzo zonke izimvo zenziwa noma yi-tablet noma idivayisi egcinwe ngesandla eyenza kube lula ukukhomba abasebenzisi beselula.
Kuzo zonke lezi zibalo ungamangala ukuphawula ukuthi kuphela ama-9% we-SMBs asebenzisa abezindaba bezenhlalo ukuze abonise uphawu lwabo. Uma kunjalo, ungathola umkhawulo ekuqedweni kokuthile okulula.
Thola isikhathi esifanele sokuhlanganyela okuqukethwe
Manje ukuthi usubonile ukuthi ubani ozokukhomba, kubalulekile ukuthola isikhathi esihle sokuhlanganyela okuqukethwe. Abanye ochwepheshe batusa ukuthi kufanele wenze njalo ngesikhathi esisodwa phakathi kwephakathi phakathi kwe-1 no-3. Uma kuziwa ku-Twitter isikhathi sisafani - ama-tweep asebenza phakathi kuka-9 ekuseni nango-3 ntambama.
Funda indlela yokuhlela
Nakuba kungase kube nzima ukuthola ukuthi inethiwekhi yakho isebenze ngenxa yezikhathi ezahlukene zesikhathi kanye nezinye izici, awukwazi ukuhamba kabi uma uhlela okuthunyelwe kwakho ngokuphelele. Thatha i-notebook bese uyinikela ngokuhlela amathebhu akho, amabhulogi, amavidiyo kanye nanoma yiluphi olunye ulwazi olufanele. Ungakwazi ngisho nokuzenzekelayo inqubo usebenzisa i-plug ins.
Nakho konke okunye okukhona, impumelelo yomkhankaso wakho wezokuxhumana womphakathi ubhekene nento eyodwa - ikhwalithi okuqukethwe okuthunyelwe. Ungadumali. Okuthunyelwe okuthunyelwe okwenezela ukukhiqizwa kwakho kwamakhasimende akho okuzayo futhi okwamanje; okuthile abazophoqeleka ukuba babelane ngakho.